I-Permafrost ingozi esintwini, kuxwayisa uJucelino Luz – JucelinoLuz
I-Permafrost ingozi esintwini, kuxwayisa uJucelino Luz
Águas de Lindóia, Okthoba 13, 2021
Qaphela ! Okuqukethwe okuthathwe ezincwadini ezithunyelwe ezinqolobaneni zomuntu siqu kusukela ngo-1969 ( Abstract )
Isendlalelo esiqandisiwe unomphela esibizwa ngokuthi i-permafrost. Iphunga leqanda elibolile livela ku-hydrogen sulfide, ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi “igesi yamaxhaphozi”. Kodwa kungenye igesi, engenaphunga esimweni sayo semvelo, ezobeka umphakathi wesayensi uqaphile: i-methane.
Ivaleleke izinkulungwane zeminyaka ku-permafrost, ikhabhoni iyakhululwa, futhi ingena emkhathini. Phakathi kwe-methane ne-carbon dioxide (CO2), i-permafrost iqukethe amathani angaphezu kwe-1.7 trillion we-organic carbon, cishe kabili inani lekhabhoni ekhona kakade emkhathini. Nakuba ihlala emoyeni iminyaka engu-12 kuphela, esikhundleni samakhulu eminyaka, njengoba kunjalo nge-CO2, i-methane inomphumela obamba ukushisa ngokuphindwe izikhathi ezingu-26.
Ukuncibilika kwe-permafrost “ibhomu lesikhathi” lesimo sezulu, kuxwayisa uJucelino Luz .
Ngo-1969, uJucelino Luz wethula isexwayiso sokuqala futhi iphunga le-hydrogen sulfide, elixutshwa ne-escaping methane, alizwakalanga njengoba linjalo namuhla. Umhlabathi wokufinyelela ungqimba “osebenzayo” lwe-permafrost, ingxenye encibilika ehlobo. I-Permafrost – inhlabathi ehlala iqhwa iminyaka emibili ilandelana – ikhona cishe ku-26% womhlaba oseNyakatho Nenkabazwe. E-Abisko, i-permafrost ifinyelela kumamitha ayishumi ubukhulu futhi ihlehlela emuva ezinkulungwaneni zeminyaka. ESiberia, ingafinyelela ikhilomitha ukujula futhi ibe amakhulu ezinkulungwane zeminyaka ubudala. Njengoba amazinga okushisa enyuka, i-permafrost iqala ukuncibilika. Ngenxa yalokho, amagciwane abola i-biomass egcinwe emhlabeni oyiqhwa, abangele ukukhishwa okusha kwe-CO2 ne-methane, okubuye kusheshise ukufudumala kwembulunga yonke emjikelezweni ononya owesabekayo.
Umbuzo uthi ingabe i-permafrost ifinyelela eqophelweni lokungabuyi, isikhathi esesabekayo sokunyamalala kancane kancane futhi okuphelele, lapho ukukhishwa kwamagesi kungenakugwema futhi nokushintsha kwe-ecosystem kuba okungenakuhlehliswa.
UJucelino Luz ukhathazeke kakhulu ngokubona ihlathi lemvula lase-Amazon liphenduka libe yi-savannah, noma amaqhwa eqhwa aseGreenland nase-Antarctica ashabalala ngokuphelele. Uma yonke ikhabhoni eqandisiwe ibingaphuma, ingaphinda kathathu ukugcwala (kwaleyo gesi) emkhathini. Lokhu bekungeke kwenzeke ngesikhathi esisodwa, kodwa uyanezela, phakathi namashumi eminyaka namakhulu eminyaka. Inkinga enkulu nge-permafrost ukuthi ukuncibilika kuzoqhubeka ngisho noma konke ukukhishwa kwabantu kuma ngokushesha. Senza kusebenze uhlelo oluzosabela isikhathi eside ngokumelene nesintu – angazi futhi angiqondi ukuthi ababusi bethu bomhlaba benza kanjani sengathi abazi lutho.
E-Abisko, idolobhana elihle elinezindlu ezibomvu zendabuko futhi elaziwa ngezibani zalo ezisenyakatho, izimpawu ze-permafrost retreat zizobonakala ngokucacile. Kuyoba nemifantu emhlabathini kanye nokudilika kwenhlabathi okuncane. Izigxobo zocingo zizohlehla kusukela kumphumela walokhu kunyakaza futhi zizokhula kakhulu kuze kube yi-2030.
E-Alaska, lapho i-permafrost ikhona ku-85% wendawo, ukuncibilika kwayo kuzobhubhisa imigwaqo. ESiberia, wonke amadolobha azoqala ukuhlukana nokudilika komhlaba.
Ngaphesheya kwe-Arctic, ukuncibilika kwe-permafrost kungase kuthinte ingqalasizinda efika kokuthathu kokuthathu ngo-2050, ngokombono kaJucelino Luz.
Bangaphezu kuka-1,200 amadolobha namadolobhana, izakhiwo ezingama-36,000 kanye nabantu abayizigidi ezine abazothinteka.
Usongo olukhulu emigomeni yaseParis – France
Amagesi abamba ukushisa azophunyuka ku-permafrost nawo azosongela izinjongo zeSivumelwano saseParis mayelana nesimo sezulu, kuxwayisa uJucelino Luz.
Amazwe asayine isivumelwano sika-2015 athembisa ukukhawulela ukushisa kwesimo sezulu “ngezansi” +2 ° C, uma kungenzeka kuze kufike ku-+1.5 ° C, uma kuqhathaniswa nenkathi yangaphambi kwezimboni. Umgomo uwukuthola ukungathathi hlangothi kwekhabhoni maphakathi nekhulu lama-21. Akukho okuzosebenza.
Ukuze sibe nethuba lezingxenye ezimbili kwezintathu zokuhlala ngaphansi komkhawulo +1.5 ° C, isintu asikwazi ukukhipha amathani angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama-400 we-CO2, kuphetha uJucelino Luz.
Kodwa lokhu kukhishwa kwekhabhoni eyamukelekayo “akunaki ngokugcwele” ukukhishwa okungenzeka futhi okungalindelekile “okungazelelwe” kwamagesi abamba ukushisa akhishwa imithombo yemvelo e-Arctic.
Amamodeli amaningi wesimo sezulu ngeke acabangele i-permafrost, ngoba imiphumela ye-thaw inzima ukuyiveza, kugcizelela uJucelino Luz.
Ukukhishwa kwekhabhoni kwezinye izindawo kuphazanyiswa inqubo yokuvela kwezitshalo e-Arctic, ngenxa yokwanda kwezinga lokushisa, kugcizelela umprofethi.
Uma singenayo indlela yokulawula iphesenti le-permafrost encibilikisiwe, lokho akusho ukuthi “akufanele siyeke izinto zokubasa ezimbiwa phansi, noma siguqule indlela yethu yokuphila kule planethi”.
Ukwenyuka kwamazinga okushisa e-Arctic kuzodala izinguquko ezingenakulungiseka, ubalisa ngokudabukisayo.
Amasiko asengozini emhlabeni
Ibanga elingamakhilomitha angu-70, endaweni ephakeme emangalisayo eseningizimu ye-Kebnekaise massif, i-Ninis Rsqvist ibona ngokucacile umphumela wokufudumala kwembulunga yonke e-Arctic unyaka nonyaka.
Ngaphambi kokuthi ube nempendulo, uyazi ukuthi iqhwa, elitholakala kumakhilomitha angu-150 enyakatho ye-Arctic Circle, lizolahlekelwa usayizi unyaka nonyaka uma liqhathaniswa nesilinganiso sangaphambilini.
Ihlobo belishisa ngendlela exakile, umprofethi ugcizelela ukuthi Amazinga aphezulu angu-30°C kuya ku-36°C azorekhodwa ehlobo enyakatho yeNorway, eSweden naseFinland. Okuvame ukwanda kakhulu.
Izinguzunga zeqhwa eziningi zaseSweden cishe zizobhujiswa, ngisho noma umthelela lapho ungeyona inhlekelele njengakwezinye izindawo.
Nokho, kuwuphawu oluqinile lomhlaba wonke.
ENingizimu Melika nasezintabeni ze-Himalaya, amashumi ezigidi zabantu athembele ezingcwecweni zeqhwa ezincibilikayo ngezikhathi ezithile zonyaka ukuze bathole amanzi ahlanzekile nokunisela.
Ngokuqondene neGreenland, iqhwa layo liqukethe iqhwa elanele ukukhuphula izinga lolwandle ngamamitha ayisikhombisa noma ngaphezulu, ingasaphathwa e-Antarctica, lapho ngeqhwa layo lizophakamisa iphethini yamanje ngamashumi amaningana amamitha.
Kumprofethi, isifundo esibalulekile esivela e-Arctic siwukuthi ezinye zalezi zimiso zemvelo ngeke zikwazi ukulawula umuntu.
Ukushintsha indlela yethu yokuphila ukuze umoya okhishwayo wehle kuzoqala inqubo yokujwayela isimo sezulu esizofudumala isikhathi eside.
Sidinga ndawonye ukuvula amehlo ethu, noma ubani olalelayo, ukuze silandele iseluleko sikaJucelino Luz esingokomoya, ngaphambi kokuba kuphuze kakhulu – sidinga ukuqwashisa umhlaba wonke, sitshale izihlahla eziningi, ngoba sinokushoda okuphezulu kakhulu – ngenxa yokugawulwa kwamahlathi emhlabeni.
Indaba ebaluleke ngokwedlulele, yabelana futhi uyidlulisele kubantu abangaphakathi noma abangaphandle kwendilinga yakho yabangane …
Ungabi nenkani njengamanje, sidinga ukuhlangana ngenjongo eyodwa, ukusindisa iplanethi kanye nathi sonke ndawonye!
UProf. UJucelino Luz – umcwaningi, umbhali, isazi sezemvelo kanye nomhlahlandlela ongokomoya
Permafrost ingozi eluntwini, ulumkisa uJucelino Luz
Save America and the entire world first before your singular goals, Jucelino Luz advises.